Sida loo soo dhoofsadaan MTS in Pro Goo Final u habaynta
> Resource > FCP > Sida loo soo dejinta MTS in ay Final Cut Pro for Faalladaada
Sida loo soo dejinta MTS in Pro Goo Final u Faalladaada
MTS / M2TS caadi ahaan laga helo AVCHD video clips duubay kaamirada ka mid ah Panasonic, Sony, JVC, iyo Canon. Kuwani files MTS / M2TS yihiin natively oo ay taageerayaan Final Cut Pro. Laakiin sida caadiga ah, waxaad heli karaan aadan dajiyaan karaa M2TS / MTS in ay Final Cut Pro for tafatirka. Sababta tani waa M2TS ama faylasha MTS ma noqon kartaa si buuxda u la jaan qaada Pro Goo Final.
Maqaalkani waxa uu markaas bay idiin ahaan lahayd mid caawisa oo weyn oo muujinaysa sida ay u badalaan MTS in ay Final Cut Pro files si buuxda u socon in talaabo talaabo aad. Si sidoo kale sii tayada video ah ku dhameystaan ​​Pro MTS Final jaro hawsha sida ugu dhaqsaha badan, a Video Converter u Mac waa in la isticmaalo. Just download oo ku xidh, ka dibna raac ah saddex tallaabo ka hor inta aadan soo dhoofsadaan files si aad FCP u tafatirka:
1 Import MTS files si MTS in ay Final Cut Pro Converter
Waa qadarin kuu oggolaadaan in aad si toos ah jiidi oo hoos u files fiidiyo aad galay app Mac loogu bilaabi MTS si aad u diinta FCP. Just xiriiriyaan fiidiyo, ka dibna ay maamulaan barnaamijkan. Markiiba, waxaa lagu ogaan doono qalabka, oo waxaad arki kartaa dhammaan faylasha MTS diiwaan shaashadda. Just dooro faylasha aad rabto, iyo riix "Load" badhanka si ay u dajiyaan.
Haddii aad leedahay dhowr files MTS iyo argo iyaga ku milmaan mid u qaadan file ah oo joogto ah, waxaad eegi kartaa "midowdo" ikhtiyaarka hoose ee interface ugu weyn ee MTS in ay Final Cut Pro Converter.
2 Set Final Iska yaree qaab socon Pro sida qaab wax soo saarka
Si ay u badbaadiyaan nafaha lagu waqtiga aad, codsiga MTS in FCP bixisaa horena ah filaayo in Final Cut Pro si aad si toos ah u dooran kartaa sida u qabo qaybta "ayeey" sida qaab wax soo saarka aad.
3 bilow si loogu badalo MTS in Final Cut Pro
Guji "Beddelaan" ka dibna inta kale si toos ah la gaadhay lahaa. Ka dib markii in, waxaad ka heli kartaa faylasha wax soo saarka aad Mac, ka dibna si guul ah iyaga dajiyaan in Pro Goo Final ah ee video tafatirka. The app Mac shaqeeyaa ganaax ku iMac, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air socda Mac OS X Snow Leopard, Libaaxa iwm
Talooyin: Dhab ahaantii, barnaamijka ayaa sidoo kale ku siinaysaa dhammaan qalab caadi video tafatirka. Haddii u baahan tahay, waxaad si toos ah xaalkaa kartaa videos in app this.
Ogow badan oo ku saabsan Final Cut Pro:
Laga soo bilaabo Creech casriga ah ee Final Cut Pro ah, waxaynu og nahay inaynu "karaa isticmaali function Log iyo Transfer ee Final Cut Pro si liqi Panasonic AVC-Intra iyo DVCPRO HD ka kaararka P2, Sony XDCAM hore, iyo AVCHD. Or isticmaali XDCAM free Sony ee software Transfer in liqi XDCAM, 18-, 25-, oo 35-Mbps XDCAM HD, iyo XDCAM HD 422 warbaahinta . " Si aad u ogaato wixii faahfaahin ah, waxaad tagi kartaa ee Creech casriga ah ee Final Cut Pro . Iyo in ay dajiyaan MTS in ay Final Cut Pro for tafatir dheeraad ah, waxaad u gudbin kartaa buuga user of Final Cut Pro in Apple.com.
Dheeraad ah Reading:
Beddelaan MTS in QuickTime MOV : Haddii aad leedahay badan oo files MTS, waxaa jira fursad aad rabto in aad si loogu badalo aad camera MTS videos in qaab QuickTime MOV loo isticmaali in software Apple sida QuickTime, iMovie iyo qalabka sida iPhone, iPad, iPod taaban iwm
Beddelaan AVCHD M2TS / MTS in Lugood: files AVCHD M2TS / MTS aan si toos ah laga keeno karaa in Lugood. Sidaas darteed haddii aad rabto inaad ku darto ama MTS M2TS video files si Lugood maaraynta file ama syncing qalabka Apple, aad u baahan tahay si loogu badalo M2TS / MTS in Lugood qaabab ay taageerayaan hore.
MTS Import in Adobe jilitaankii : doonayaa inaan badalo aad MTS files si Adobe Premier aan khasaaro tayo leh? Ka fiirso halkan sameeyo. Maqaalkani waxa hubaal kaa caawin kara inaad badalo MTS in Adobe jilitaankii qaabab socon, si aad u dajiyaan karaa files MTS in app this video tafatirka iyadoo wax dhibaato ah.
Beddelaan MTS in qaab kasta oo ku Computer : Wondershare MTS video Converter u Mac kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo MTS video files si kasta oo qaab maqal iyo muuqaalka leh, iyo tan iyo qalabka iwm
Beddelaan MTS in ProRes : Haddii aad rabto in aad si loogu badalo MTS in ProRes u tafatirka siman ee FCP, iMovie, ama Adobe Premier, maqaalkan aad ku tusi doonaa sida loo sameeyo tallaabada shaqadan talaabo. Just halkan tilmaan faahfaahsan.
Sida loo soo dejinta Videos fiidiyo Noolaado Kan sameeyey Movie
Sida loo rogo ama MTS in DVD si fudud oo dhaqso (Windows 10 ka mid ah)
Sida loo dar horyaal ee Final Cut Pro X
FCP X: Samee Burns Ken hawlgeli
Ma dajiyaan karaa MP4 galay Final Cut Pro? Xaliyay
Sida loo dhoofin videos ka pro cut dambeeya ee Mac
Top 20 foom oo final cut pro u isticmaala Mac
20 Final Cut Pro saamaynta X aad u.
3 Talo-finalka Goo Express
Talooyinka Final Cut Pro 7